စေဒနာနှ့င်ရင်း၍ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Aha! Jokes, Satire » စေဒနာနှ့င်ရင်း၍	12
Posted by ဂျစ်စူ on Dec 16, 2015 in Aha! Jokes, Satire | 12 comments
အီ ပုံသည် အဘ ဗိုးဗိုးမြောက် ဘီယာ သုံးဆောင်နေသောပုံ ဖြစ်သည်။
အီပုံ အောက်တွင် သင်ဒို့ အလိုရှိရာ တောင့်တအပ်သော
ဆုတစ်ခုကို ကွန်းမန့်ရေး၍ တောင်းဆိုပါလေ။
သင်ဒို့လိုအင်များ တမဟုတ်ချင်း ပြည့်ပါလိမ့်မည်။
ခွင့်သာခိုက်မှ မလိုချင်ကြလျင် သင်တို့မိုက်ပြစ်နှင့် သင်တိုပင် ရှိပါစေလေ ကျနုပ်က စေဒနာ နှင့်မျှဝေခြင်းသာ ဖြစ်ချေသည်။
မှတ်ချက်။ ။ စနေ တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက်များ မတောင်းရ၊ အဘဗိုးဗိုးမြောက် ရုံးပိတ်ရက်ဆို မအား ဘီယာ ဆိုင်တကာလှည့် ၍ မတရားထိုင်နေတတ်သဖြင့် ထိုနေ့များ Off ပါသည်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အီသို့အီနယ်
ဘီယာသောက်တတ်သော မြောက်ကို စလုံး ဇူး ကို ရောင်းစားနိုင်သောသူ ဖစ်ရပါလို၏။
E.မြောက်မြောက် says: ဗိုးဗိုးမြောက်ကျီးခင်ဗျား
ကျနော်နဲ့ သိပါတယ် တစ်ရွာထဲသားတွေပါ
အိမ်းကွဲ့ အိမ်းကွဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: မြောက်သားစားရလို၏။
E.မြောက်မြောက် says: အိမ်းကွဲ့ အိမ်းကွဲ့
joe wynn says: အသိဂျပန်တစ်ယောက်ကတော့ မြန်မာပြည်သွားတုံးက မျောက်အရှင်ကို ဦးနှောက်ဖောက် စားလာသတဲ့ဗျ မြန်မာပြည်မှာ
E.မြောက်မြောက် says: ချစ်ဆြာ မျောက်ခေးတွေ တနားပါတယ် လုပ်ကြပါနဲ့ ပျက်ရယ်မပြုကြပါနဲ့
မျောက်ကိုင် လိမ့်မယ် မကြောက်ကြဘူးလားနော်
မျောက်က ကိုင်ပြီးရင် လွှတ်ချင်တဲ့ဟာမှ လွှတ်တာ
မြစပဲရိုး says: လောလောဆယ်မှာ တော့ အွန်လိုင်း လူမှုကွန်ယက်များ၊ ပေါက်တတ်က ရ သတင်းဌာန များနှင့် ဝေးဝေး နေနိုင်သူ ဖြစ်ရပါလို၏။
တောင်းတာမပြည့်ရင်တော့ လား။ ဒီ မြောက်တော့ …… BTW – ဂွဇွတ်ရွာ က ပေါက်တတ်ကရ သတင်းဌာန အမျိုးအစားထဲ ပါလား။ ကွန်ဖမ်းပေးကြပါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12168
alinsett says: .ဖွေးဖွေးကို ဖက်၍ …မျောက်ပွဲကြည့်ရပါလိုအိ…
Mike says: .မြောက်ဇာဒိပြဒါပေါ့လေ..ဟုတ်စ
.မသကာ..ဘီအီးပုလင်းနဲ့ဆိုတော်သေး ဟေးဟေး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: အခုချက်ချင်း ပွိုင့်တစ်သိန်းပြည့်ရပါလိုအိ…
Wow says: ဒီမြောက်အမွှေး ဟိုက်လိုက်ဖောက်ထားတာမြန်းလား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6346
E.မြောက်မြောက် says: ဟယ်.
ခုဏက မျက်လုံးတစ်ဖက် မှိတ်ပြတယ်
Aကန်တ ဒို့ရွာသားတွေ စုတောင်းပြည့်တော့မယ်ထင်တယ်